Wararka Maanta: Axad, Sept 2 , 2018-Qaraxyo waaweyn oo laga maqlay garoon militariga Syria ay ku leeyihiin Dimishiq
Warbaahinta maxalliga ee Sanca oo soo xigatay iloo wareedyo militariga ka tirsan ayaa sheegtay in qaraxyada ay ka dhasheen hub lagu qubay garoonka diyaaradaha militariga Mezzeh ee ku yaalla koonfur bari magaalada caasimmada ah ee Dhimishiq.
Warbaahinta ayaa sidoo kale sheegtay in qaraxyada ay ka dhasheen cilad ku timid koronto.
Militariga Suuriya ayaa mar dambe beeniyay in Israa'iil ay ka dambeysay qaraxyada, sida ay sheegtay warbaahinta Sanca.
Sawirro baraha bulshada lagu baahiyay ayaa muujinayay goobta ay qaraxyada ka dhaceen.
Bishii May ayay ahayd markii Israa'iil ay weerartay saldhigyo militariga Iiraan ay ku lahaayeen gudaha Suuriya kaddibna Iiraan waxay gantaal ku tuurtay Israa'iil.
Isla bishaasi Israa'iil waxay soo ridday mid ka mid ah diyaaradaha dagaalka ee Suuriya taaso ay sheegtay inay ku xaadgudubtay hawadeeda.
Israa'iil ayaa duqaymo cirka ah ka gaysatay dalka Suuriya, sannadkii lasoo dhaafay ayaa lagu eedeeyay inay weerar ku qaaday garoonka militariga ee Mezzah.